पोको एम २ र पोको सी ३ सार्वजनिक, मूल्य कति ? - Aarthiknews
पोको एम २ र पोको सी ३ सार्वजनिक, मूल्य कति ?
शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले भने, “पोकोले पहिलै मी फ्यानहरु र प्रयोगकर्ताहरुबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ र नेपालमा यी ब्राण्डका दुई नयाँ स्मार्टफोेनहरु सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित छौँ । पोकोमा हामी स्वतन्त्रता पूर्वक निर्णय लिन र विकासको बाटोमा अघी बढिरहन केन्द्रित रहेका छौँ, त्यसैले हामीले प्रयोगकर्ताहरुको छनौटका लागि शिर्ष विशेषताहरुका साथ पोको एम२ र पोको सी ३ सार्वजनिक गरेका छौं । हामीले आशा गरेका छौं कि यी नयाँ स्मार्टफोनहरुले नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि यस ब्राण्डतर्फ आकर्षित गर्नेछ ।”
पोको एम २ - सुपर फास्ट ६ जीबी र्याम स्मार्टफोन
पोको एम२ मा मिडियाटेक हेलियो जी ८० अक्टा-कोर प्रोसेसरका साथै २.०जीएचजेड मा दुई कोटेक्स—ए ७५ र १.८ जीएचजेड मा छ कोटेक्स—ए५५ को साथ आउँदछ जसले पर्फमेन्स र दक्षताबीच सन्तुलन झल्काउँदछ । मिडियाटेक गेमिङ्ग विशेषताहरुका साथ पोको एम२ प्रयोगकर्ताले आर्कषक गेमिङ्गको आनन्द लिन सक्नेछन् । माथि उल्लेखित विशेषताहरुसंग एकेबद्दता जनाउँन ६ जीबी र्यामका साथ यो पूर्ण सम्पन्न उपकरणले या श्रेणीका मापदन्डहरुलाई माथि उठाउने छ ।
गा्रहकहरुलाई उच्चस्तरीय दृश्य अनुभव प्रदान गर्नको लागि, पोको एम२ मा ६.५३ इन्च पूर्ण एचडी प्लस डिस्प्ले, २३४०× १०८० रीसोलूशन र १९स्५स्९ को आकृति अनुपात पनि रहेको छ । साथै कर्निंग गोरिला ग्लास ३ ले स्क्रीनलाई आकस्मिक क्षति र स्क्र्याचबाट सुरक्षित राख्दछ । उक्त डिस्प्ले त्%ख् च्जभष्लबिलम बाट रिडिङ्ग मोडका लागि सर्टिफाइड पनि भएको छ ।
फ्रन्टमा नजिकै एड्ज-टु -एड्ज डिस्प्लेका साथ, पोको एम २ को रियमा फिंगरप्रिन्ट सेनसर छ जसले उपकरणलाई छिटो अनलकिङ्ग गर्न अनुमति दिन्छ । फोनको सुरक्षाको लागि एद्दष् न्यानो कोटिङ्ग पनि छ जस्ले पोको एम २ लाई अनावश्यक स्प्ल्यास प्रतिरोधी बनाउँदछ ।
पोको एम२ मा क्वाड क्यामेराको विशेषता रहेको छ जसमा १३ एमपी प्राइम सेन्सर, ८ एमपी अल्ट्रा वाइड सेन्सर, ५ एमपी म्याक्रो सेन्सर र २एमपी डेप्थ सेन्सर समावेश छ । ८ एमपी अल्ट्रा वाइड क्यामेराको साथ ११८ डिग्री फिल्ड भ्यू खिच्न र प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ने दृश्य अवलोकनलाई विस्तार गर्दै ड्रामेटिक क्लोजअप शटहरु लिन सक्छन् ।
प्रयोगकर्ताले म्याक्रो क्यामेरामा रमाइलो भिडियोका लागि पूर्ण एचडी फूटेज लिन सक्छन् । पोको एम२ ५००० एमएएच बिल्ट-इन ब्याट्रीका साथ आउँदछ र लामो समयसम्म ब्याट्री ब्याकअपका लागि १८ वाट्ट फास्ट चार्जिंग (१० वाट्ट इन बक्स) समर्थन गर्दछ ।
पोको सी ३ - गेम चेन्जर
टु-टोन डिजाइन अभिलक्षणका साथ पोको सी३ यस क्षेणीमा प्रयोगर्ताहरुलाई उत्तम तरिकाले फिट हुने स्मार्टफोन बनाउन आन्तरिकहरुको सन्तुलित सेटका साथ आउँदछ । पोको सी३ बजारमा उपलब्ध भएको सबैभन्दा सस्तो ट्रिपल क्यामेरा फोन पनि बनेको छ । पोको सी३ को ट्रिपल क्यामेरा सेटअपमा १३ एम.पी प्राइमरी सेन्सर, २ एम.पी म्याक्रो सेन्सर र १३ एम.पी डेप्थ सेन्सर पनि छ । डेप्थ सेन्सरले क्रिमी बोकेहका साथ क्रिस्प पोट्रेटहरु खिच्न मद्दत गर्छ, म्याक्रो सेन्सरले रमाइला क्लोज अप शटहरु साथै ७२०पी मा म्याक्रो भिडियोहरु पनि शुट गर्ने क्षमता राख्दछ ।
पोको सी३ मा प्रयोगकर्ताहरुले ६.५३ इन्च पूर्ण एचडी प्लस डिस्प्ले का साथ १६०० × ७२० रीसोलूशन र २०स्९ को आकृति अनुपातको मज्जा उठाउन सक्नेछन् । फोनको सुरक्षाका लागि एद्दष् न्यानो कोटिङ्ग पनि छ जस्ले पोको सी३ लाई अनावश्यक स्प्ल्यासबाट बचाउँछ । साथै डिस्प्ले त्%ख् च्जभष्लबिलम बाट रिडिङ्ग मोडका लागि सर्टिफाइड छ । यसको मतलब यो फोन लामो समय सम्म प्रयोग गर्दा पनि आखाँलाई कम मात्रामा जोड पर्छ ।
पोको एम२, ६ जीबी+६४ जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा १८ हजार ९९९ रुपैयाँ मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ । यो फोन ब्रिक रेड, पिच ब्लाक र स्लेट ब्लू कलरहरुमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पोको एम २ आर्कटिक ब्लु, लाइम ग्रीन र म्याट ब्लाक रङ्गहरुमा ४ जीबी+ ६४जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा १४ हजार ९९९ रुपैयाँमा मूल्यमा उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ ।